Uggurri sochii kun kan labsame erga angawoonni eegumsa fayyaa Melborn keessati namoonni 12 haaraa vaayiresichaan qabamanii booda
Kutaan Awustiraaliyaa gama kibbaa Viktooriyaan sababaa weerara COVID-19 haaraa ka’e irraan kan ka’e torban tokkoof kan turu uggura sochii kamisa har’aa jalqabee jira.
Uggurri sochii kun kan labsame erga angawoonni eegumsa fayyaa Melborn keessati namoonni 12 haaraa vaayiresichaan qabamanii booda yoo ta’u, kunis lakkoobsa namoota vaayiresii koronaan qabaman kan magaalaa guddoo sanaa 26n ga’ee jira.
Eeggataa muummicha ministeera akan ta’an James Merliinoo tuuta oduuf Melborn keessatti ibsa kennaniin, weerarri haaraan kun vaayiresichi akkaan kan ddarbuu fi yaaddessaa yoo ta’u, kan nuti yaadnee ol hatattamaan faca’aa jira jedhan. Kanneen haaraa vaayiresii kanaan qabaman kanneen biyootii alaatti imalanii fi vaayiresii jalqaba Hindii keessatti argameen qabamuu ennaa hoteela keessatti moggaatti baafaman beekuun danda’amee jira.
Jiraattonni manaa ba’uun kan eeyamamuuf, hojii barbaachisaa ta’e, mana barnootaa, namootaaf kanneen kunuunsa godhan, shaakala spoortii fi mana yaalaa dhaquuf akkasumas talaallii farra koronaa fudhachuuf beellama yoo qabaatan qofa.
Erga weerarri kun jalqabee qabee Viktooriyaa irra uggurri ennaa kaa’amu isa haaraa miilanaan yeroo arfaffaa dha. Yeroon akkaan hamaa ture walakkeessa bara 2020 ennaa uggurri sochii baatii sadii yoo ta’u, ennaa sana magaalaan Viktooriyaa weerara COVID-19 marsaa lammataa namoota 800 ol galaafateen dha’amte.
Kampanileen dawaa gurguddoon Awrooppa alama kan Ferensaay Sanofi fi kan Briteen GlaxoSmithLine kamisa har’aa akka beeksisanitti, yaalii talaalee dhumaa geggeessuuf jiran.
Yaaliin talaallii kunis ga’eessota 35,000 kanneen Asia, Afriikaa fi Latin Ameerikaa fi Yunaaytik Isteetis keessaa irratti ta’uuf jira.